Hafatra ho an'ny vahoaka avy amin'ny Komity RRM Europe - Madagascar va très mal
Publié le 16 avril 2009 par Ny marina tsy maty
Hafatra avy amin’ny Komity RRM Europe : HO AN'NY VAHOAKA MALAGASY MANONTOLO
Miarahaba ny Praimisitra vaovao ny Gouvernemanta Manandafy Rakotonirina, izay notendren’ny Filoham-pirenena Marc Ravalomanana, ny Komity Mpanohana ny Démokrasia, sy ny Lalam-panorenana ary ny Repoblika Malagasy RRM Europe na Comité de soutien de la Démocratie, de la Constitution et de la République Malgache : RRM Europe.
Hita amin’ny safidiny fa Filoham-pirenena misokatra tokoa amin’ny fivoarana sy ny fiaraha-miasa amin’ny vondrom-politika samihafa ny Filoham-pirenena Marc Ravalomanana.
Praiministra nanaraka ny ara-dalana sy ny marina, ary nanajà hatrany ny lalam-panorenana sy ny demokrasia no nofidian’ny Filoahm-pirenena hanangana miaraka aminy ny Gouvernemanta.
Antso avo hoan’ny Firaisam-pirenena Malagasy izao hataon’ny Filoha Marc Ravalomanana izao, indrindra fa hoan’ny maro an’isa tsy nankasitrakana ny fanonganam-pajakana, ny tsy rariny rehetra, ary ny heri-setra sy ny halatra bevava nataon’ny HAT sy ny « miaramilam-potoka » mpisandoka.
Iarahana mahalala ny tsy fisian'ny vola intsony ao amin'ny tahirim-panjakana hatramin'izay fikorontanana nisy eto amin'ny firenentsika izay. Lanin’ny HAT ny vola nozarazarainy hanonganam-panjakana. Efa mifanontany tena ny rehetra ny amin'izay ho avintsika sy ny karamantsika atsy ho atsy. Tsy miafina intsony ihany koa ny fipenimpenin'i Andry Rajoelina mitady vola etsy sy eroa hampandehanana ny fitondrany sandoka sady tsy mahaefa.
Tsy namaly azy anefa, na ireo Mpamatsy vola mahazatra antsika any ivelany, izay nametraka ny fitokisany tanteraka amin’ny Filoha Marc Ravalomanana, ka tsy mankasitraka izao fanonganam-panjakana izao; na ireo firenen-kafa be vola toa ny Amerikana sy ny Norveziana dia nampiato avy hatrany ny fanampiany an'i Madagasikara.
Amin'izao fotoana izao ary, dia renay fa mitohy ny fifanarahana antsokosoko eo amin'ny fitondrana Frantsay izay soloin'ingahy Chatâignier tena sy ingahy Rajoelina, Herinandro maromaro izao no niaretan'ny Malagasy izao herim-pamoretana izao, ary niverenana niainana indray izay tsy nampoizina hiainana intsony amin'izao taon-jato faha 21 izao: ny filaharambary sy menaka, ny tsy fisian'ny sakafo azo vidiana intsony, ny tsy fahafahana miteny ankahalalahana intsony ary koa ny famoretan'ny miaramila sy ny fanjakan'ny jiolahim-boto mpangalatra na andro na alina.
Nisy tamintsika, nandritr'izay tolona izay, no maty namoy ny ainy, no very tsy hita popoka na maty na velona hatramin'izao ora hitenenantsika izao, sy ireo maratra mbola mila fikarakarana fatratra. Ao ireo mbola mitohy very fananana, ny miaritra ny fanendahana sy ny ramatahora eny andalambe sy eny anelakela-trano rehetra ihany koa.
Etsy andanin'izay anefa, ireo mpanonga-panjakàna, tsy menatra ny mangalatra ampahibe-maso, na ny vola tao amin'ny banky foibe, na ny orinasa sasantsasany toy ny JIRAMA, na ny seranantsambo izay toerana nitahiry ireo fiara saika handraisana ny Fihaonam-be Afrikana. Ankehitriny dia izy ireo no mitavana ireny tombontsoa rehetra ireny: Ry Drala no lasa mpanankarena tampoka mitondra 4x 4, ho takalon'ny fiandaniany amin'ny HAT mandritry ny serasera nifanaovana teo anivon'ny ONU, ary maro ireo fiara nifampizaran'izy ireo, izay navoaka tamin'ny fomba tsy ara-dalàna, entina hirehareha sy hanosihosena ny zontsika Malagasy mahantra potiky ny fitondrana teteza-mita tanteraka tamin'ny hosoka sy ny famonoan'olona ary ny setrasetra miaro habibiana.
Noho izany, ny komity RRM Europe dia mangataka etoana ny fialan'i Andry Rajoelina sy ny forongony tsy misy hatakandro eo amin'ny fitondrana mialohan'ny fiavian'ny SADC sy ny vondrona afrikana eto Madagasikara.
Henatra ho an'ny Malagasy sy ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany ny fisiana Mpangalatra sy Tontakely tsy nofidian'nyy Malagasy akory eo amin'ny fitondram-panjakana.
Tonga eo amin'ny dingana farany isika ry Malagasy, ary aoka ho mailo hatrany ny amin'ny fihetsika mahery vaikan'ny HAT sy ny Vahiny sasany. Aoka isika tsy hatahotra intsony ny haneho ny fankahalantsika ireo fahavalom-pirenena ireo fa ny tahotsika no hararaotiny hamotehana sy hamitahana antsika: Tohero ny HAT, tohero ny vahiny mety manitsaka ny Malagasy, tohero ny fahavalo hitambarana!
Manentana ny vahoaka ihany koa, ny hiandrasantsika an'i DADA eny Ambohitsirohitra mandram-pahatongany, ka amin'izany dia tsy hisaratsaraka isika ary tsy hanitsaka ny tsipika mena, hitohy harara-dalàna fa hiandry hatramin'ny farany ny Filoha nofidiantsika dia i Ravalomanana Marc.
Komity RRM Europe
« Manandafy RAKOTONIRINA:... Bienvenue Mr Ravalomanana! »